Aas ballaaran oo Gaalkacyo loogu sameeyay Injineer Cumar Dheere (Daawo Sawirada) – STAR FM SOMALIA
Magaalada Gaalkacyo qaybta Waqooyi waxaa maanta aas ballaaran loogu sameeyay Injineer Cumar Maxamed Cabdulle (Cumar Dheere) kaasi oo xalay lagu toogtay Magaalada Gaalkacyo.
Aaska Marxuumka ayaa waxaa ka soo qaybgalay dad weyne badan oo reer Gaalkacyo ah, kuwaasi oo laga dareemayay sida ay uga xun yihiin falka dilka ah ee loo geystay Injineer Cumar Dheere.
Guddoomiye ku xigeenka Gobolka Mudug Axmed Muuse Nuur ayaa goobta aaska uu ka dhacaayay waxa uu sheegay ehelka marxuumka in laga doonaayo dilka inaysan u qabsan dad aanan raad ku laheyn.
Wuxuu sheegay cidii ka dambeysay dilkaan in baaritaano ay ku socdaan, isaga oo sheegay waxa dilka geystay inay yihiin Shabaab.
Guddoomiyaha Gobolka Mudug ee Maamulka Puntland Xasan Maxamed Khaliif, ayaa sheegay inay socdaan howlgalo ammaanka lagu xaqiijinaayo, sidoo kalena lagu baadigoobaayo gacan ku dhiiglayaasha falka dilka ah geystay.
Culimada Magaalada Gaalkacyo oo ka qaybgalay aaska ayaa ku baaqay in si deg deg ah Cadaalada loo horkeeno gacan ku dhiiglayaashii ka dambeeyay falka dilka ah ee loo geystay Cumar Dheere.
Ilaa hada waxaanan la ogeyn cida dishay Maareeyihii Shirkada Isgaarsiinta Gobolka Mudug Cumar Dheere.